Device ဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ဖြေရှင်း နည်း - keywords HERE
Home » window » Device ဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ဖြေရှင်း နည်း
Device ဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ဖြေရှင်း နည်း
Device Manager ဆိုတဲ့ အတိုင်း Device များကို ထိန်းသိမ်း ပြုပြင်ရာမှာ အကောင်းဆုံး Tool ပါ အမှန်တကယ်သာ အသုံးချ တက်မယ်ဆိုရင် Device&Drive ဆိုင်ရာပြသာနာ များကို
လွယ်ကူချောမော စွာဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ် ..ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုနေကြသူတိုင်း “Device Error Messages “ များကို တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်းတော့ တွေ့မြင်ဘူးကြမှာပါ ဒီလို Error Messages လေးတွေပေါ်မှာ အခြေခံပြီးတော့Device ဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်း ထိန်းသိမ်း နည်းကို ဆွေးနွေးသွားပါမယ် ..
ပထမဆုံး အဆင့်ကတော့ Hardware တွေကို ထိန်းသိမ်းပြုပြင် ပေးမဲ့ နေရာလေးကို သွားကြရအောင်
window logo key နဲ့ F1 ကို တွဲနှိပ်လိုက်ပါ Help and Support Center ကျလာပါမယ် Fixingaproblem ကိုက်ညီမဲ့ ဟာကို ရွေးချယ်ပြီး သူရဲ့ အစီအစဉ် လမ်းညွန်လေးတွေ အတိုင်း လုပ်ဆောင် သွားယုံပါပဲ
“ Help and Support Center “ ရဲ့ အားသာချက်ကတော့ E book များလို ရှင်းပြရုံသာမက
လိုအပ်တဲ့ tools တွေဆီကို တိုက်ရိုက် လင့်ခ် လုပ်ပေးထားလို့ အတော် လေးကို လွယ်ကူ အဆင်ပြေ ပါတယ်
Device တွေမှာ ပြဿနာ တစ်ခု ခု ရှိနေပြီဆိုရင် ကာလာ တစ်မျိုးမျိုး နဲ့ပြလေ့ ရှိပါတယ် လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်
ရအောင် Device တွေရဲ့ ပင်မထိန်းချုပ်တဲ့ နေရာဖြစ်တဲ့ Device Manager ကို Run မှာ devmgmt.msc လို့ရိုက်ထည့်ပြီး ခေါ်ယူလိုက်ပါ အ၀ါရောင် Exclamation point လေးနဲ့ ပြသနေတာကတော့ Device မှာ ပြဿနာတစ်ခု ခု ရှိနေတယ် အငြင်းပွားစရာလေးတွေ ရှိနေတယ် ဆိုတဲ့ သဘောပါ
အနီရောင် “X” နဲ့ပြသနေရင်တော့ သေချာပါတယ် Device ကို Disable လုပ်ထားလို့ပါ အပြာရောင် “ i “ လေးနဲ့ ပြနေတာကတော့ Device ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း ဖွဲ့စည်းပုံများကို Change (or) Modify
လုပ်ထားတဲ့ Information ပါ ဒီအပြာရောင် “i” လေးကတော့ တစ်ခုကို နှစ်ခုရွေးကြည့်နေ တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ပဲပေါ်ပါတယ် တစ်ခုကို နှစ်ခုကို ကြည်တယ်ဆိုတာက View Menu လေးကို အသုံးပြုပြီးတော့ “Resource by type” or” Resoure by connection” ဆိုပြီး ကြည့်ရှုခြင်းမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်အတွေ့ရအများဆုံး ကာလာဖြစ်တဲ့ အ၀ါရောင် “ ? “လေးနဲ့ Problem ပြနေရင်တော့ Device ကို double-click လိုက်ပါ
Error mesaage နဲ့ ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေကို ပြောပြနေပါလိမ့်မယ် General tab\_Troubleshoot ကို click လိုက်ပါ ကူညီပါရစေ( Help and support center) ကိုရောက်လာပါမယ် “ I’m havingaproblem with my …. ….” ဆိုတဲ့ စာကြောင်းကို Check ပေး ပြီး ရှာဖွေလိုက်ပါ လူတိုင်း အလွယ်တစ်ကူနားလည် နိုင်တဲ့ Instructions လေးတွေ ပေးပါလိမ့်မယ် Instructions များအတိုင်း Step by Step ပုံမှန်လုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေသွားပါပြီ သာမန်ပြဿနာလေးတွေကတော့ဒီနေရာလေးမှာပဲအဆင်ပြေသွားတက်ပါတယ်ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမှာ ကတော့
မေးခွန်းထဲမှာ အဖြေရှိဆို သလို Error Message များ ရဲ့ Information ကိုလိုက်ပြီး ဘယ်လို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း မှု့တွေ ပြုလုပ်နိုင် မလဲဆိုတာ ပါ ဖြစ်ပေါ်တက်တဲ့ error codes,messages တွေနဲ့ ဖြေရှင်းနည်းတွေကို လိုက်ပြီး
အောက်ပါ အတိုင်း အမှတ်စဉ် (၄၅) နဲ့ ဆွေးနွေး ပြောကြား သွားပါမယ်